Arabia Saodita : Fianakaviana Iray Monina Aminà Toeram-pandevenana · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita : Fianakaviana Iray Monina Aminà Toeram-pandevenana
Voadika ny 30 Janoary 2012 6:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Français, عربي, Español, Deutsch, Shqip, Svenska, Català, বাংলা, polski, English
Lavitry ny sehatra politika ary akaiky kokoa ny maha-olombelona, lahatsary fohy iray novokarin'ilay tanora Saodiana iray mpamokatra sarimihetsika, Bader AlHomoud, nomena anarana hoe “Almagbarah,” izay midika hoe Toeram-pandevenana ho an'ny Arabo, no nanova ny andavanandrom-piainan'ny fianakaviana Saodiana iray. Bader dia manoritsoritra ny dingana nandrafetana azy io ao amin'ny bitsiny :
Ketraka aho androany raha namoaka lahatsary iray izay hampihetsi-po anareo ihany koa.
Ilay lahatsarinà telo minitra, nakarina etsy ambany avy ao amin'ny Youtube, dia maneho fianakaviana Saodiana iray monina ao anaty Toeram-pandevenana iray. Tsy misy fanamboamboarana, na resaka. Izy io dia manasongadina ny mpikambana ao anatin'ilay fianakaviana sy ny zanany milalao manodidina ilay toeram-pandevenana ary ny fahantrana lalina iainan'izy ireo.
Ireo Saodiana mpandefa bitsika dia tohina tao am-pony tamin'ilay lahatsary ary eto ambany eto ny sasany amin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo, eo ambanin'ny tenifototra #ma8barah.
@MarwanAlrouqi dia manoritsoritra ny lalan-tsaina ao ambadiky ny nakana ilay toerana [ar]:
Ry vahoaka Saodiana malala, mba hampetipety anareo, dia nisafidy sarin-toeram-ponenana iray ho anareo izahay, izay lavitry ny tabataba ary akaiky ny toeram-pialanareo sasatra!
Sary iray avy amin'ilay lahatsary
@hayaalshatti manontany hoe[ar]:
Tratrantsika ve ny teboka tsy maintsy hanabaribariako ny fiainako mba hahazoana ny haja maha-olona? Ho voahozona anie ireo rehetra izay nanendaka tamin'izy ireo ny maha-olona azy!
Ary ho fanehoan-kevitra amin'ilay lahatsary, izay efa nisy nijery maherin'ny in-148.000 tao amin'ny YouTube, smartman7779 miteny hoe [ar]:
Mampalahelo izao, tena nitomany aho nijery azy io ! Isaorana Andriamanitra noho ny toerana misy ahy
Ora telo taorian'ny namoahana ilay lahatsary, Princess Ameerah Al-Taweel, izay Filoha lefitry ny Filankevi-pitantanana sady Lehiben'ny Komity mpanatanteraka ao amin'ny Al-Waleed bin Talal Foundations, dia nanambara tao amin'ny kaontiny ao amin'ny Twitter hoe :
Ny Al-Waleed bin Talal Charity Foundation dia hanome toeram-ponenana maharitra ho an'ilay fianakaviana, efa mifandray amin'i Bader AlHomoud izahay amin'izao fotoana.
@malsahli dia manamarika hoe :
Raha toa ny fahaiza-mamoron'i Bader tsy nitondra masoandro ho an'ity fianakaviana ity, dia ho nitohy niaina tany ambadik'ireo trano manaka-danitra ry zareo ary adino tany !
ary i @essamz manindry tsara ny tanjaky ny media sosialy :
Lahatsarty iray maharitra telo minitra monja dia nahavaha olana iray tao anatin'ny ora telo.. izany no herin'ny media vaovao !
Roa andro taty aoriana, @BaderAlHomoud dia nanambara hoe :
Nahazo fiara avy aminà malala-tànana tsy nitonona anarana ilay fianakaviana